Matt Dyer's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Matt Dyer
Matt Dyer ndiye Musoro weKutengesa uye Kushambadzira pa Zilliqa, kwaanozoshanda mhiri kweCommerce Technology uye Kushambadzira zvikamu kune vari mubhodhi vatengi vazhinji vebhizinesi paZilliqa's BaaS sevhisi. Matt anounza pamusoro pemakore gumi nemasere ehunyanzvi hwebhizinesi kubva kune ese ari maviri kutengesa uye kuenda-kumusika maonero.
Beyond Screen: Maitiro eBlockchain Aachaita Sei Kushambadzira Kwekushambadzira
Mugovera, Kubvumbi 10, 2021 Mugovera, Kubvumbi 10, 2021 Matt Dyer
Tim Timers-Lee paakagadzira iyo Webhu Yepasi Pose pamusoro pemakumi matatu emakore apfuura, haaigona kunge akafanoona kuti Internet yaizoshanduka ichive chinhu chinowanikwa kwese nhasi, zvichinyatso shandura mashandiro anoita nyika kumatunhu ese ehupenyu. Pamberi peInternet, vana vaishuvira kuve maastronomesa kana vanachiremba, uye iro zita rebasa revanokurudzira kana gadzira zvemukati zvaive zvisipo. Kufambira mberi kusvika nhasi uye vangangoita makumi matatu muzana yevana vane makore masere kusvika gumi nemaviri